Xog iyo Warbaxin Xasaasiya' Booliiska Sucuudiga oo Mar Dalbaday in lasoo qabto Qunsunka Somalia?
14 October, 2017 in by BANA Mogdishu Office
Booliiska Wadanka Sucuudi Carabiya ayaa la'ogaaday in sanadii la soo dhaafey ay mar isku dayeen in ay xabsiga dhigaan Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee Magaalada Jeddah ee dalka Sacuudig, kaasi oo ay ku eedeeyeen in uu ku lug lahaa Howlo Muqalasn
Booliiska Wadanka Sucuudi Carabiya ayaa la'ogaaday in sanadii la soo dhaafey ay mar isku dayeen in ay xabsiga dhigaan Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee Magaalada Jeddah ee dalka Sacuudig, kaasi oo ay ku eedeeyeen in uu ku lug lahaa Howlo Muqalasnimo ah.
Sidoo kale waxay Booliiska la xiriiriyeen in uu la shaqeynaye Kooxaha Dadka ka tahriibiya Soomaaliya ee Sacuudiga Geeya.
Sida uu qoray Alleastafrica, oo Xog ka heleysa Booliiska Sucuudiga ayaa weydiistay Maxkamada Sare ee wadankaasi in ay u soo saarto Ruqsad xarig ah oo ay ku dalbanayaan ogolaanshiyaha in xabsiga ay dhigaan Qunsulka Soomaaliya ee Magaalada Jiddeh.
Waxay Sabab ugu dhiganayeen in uu yahay Diblumaasi heysta Xasaanadda Diblumaasiyadda, oo aanan sharciga siineen ama u fasaxeen in ay soo xiraan Ciidamada, bilaa ogolaanshiyo Maxkamadeed.
Sidoo kale waxa ay soo xiganayaan Mas’uuliyiin iyo Diblumaasiyiin katirsan Dowlada Soomaaliya, Wargeyska waxa uu sheegay in Booliiska Sucuudiga ugu dambeyn lagu qasbay in Ay ka tanaasulaan isku daygooda ah in ay raadiyaan Qunsulka, kadib markii Dowlada Sucuudiga oo ka duuleysa cabasho kaga timid Dowlada Soomaaliya ay arintaasi soo faragalisay.
Mudane Siyaad Maxamuud Shire oo horay u soo qabtay xilka Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee Kenya ayaa la sheegay in uu dafiray eedeymaha loo soo jeediyay, kuwasi oo uu ku
tilmaamay kuwo aan sal iyo raad laheyn, iska markaana Sacuudiga uu ka badbadiyey Kiiskaan sida uu sheegay, waxa uuna tibaaxay in uu ka badbaaday falkaas lagu doonaye in lagu soo xiro, maadaama ay waayeen Booliiska Ogolaanshiyo Maxkamadeed.
Saraakiil Soomaaliya ku sugan ayaa sheegay in Siyaad Maxamuud Shire uu markii meesha laga saaray isku dayga booliiska ee ay ku xiri lahaayeen uu u soo safray magaalada Muqdisho, waxa uuna helay warqad rasmi ah oo loogu magacaabay Madaxa Hab Maamuuska Madaxtooyada.
Balse dadka arintani la socday ayaa ku tilmaamay magacaabista iyo safarka deg dega ah ee Siyaad uu ku yimid Magaalada Muqdisho mid uu uga gol lahaa in uu uga nasto jahawareerki arimaha la xiriira xariga ay ku raadinayeen Booliiska Sucuudiga oo Warbixino dhowr ah oo ay ka qoreen ku eedeeyay in uu hayo Howlo ka baxsan Shaqooyinka Diblomaasiga.
Siyaad Maxamuud Shire ayaanan ku sii nagaanin xilka loo magacaabay, isagoo mudo bil ah kadib iska casilay xilkaasi kadib markii ay dhaliilo uga yimaadeen Agaasimihi xiligaasi ee
Madaxtooyada, isla markaana iminka haya xilka Safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay, Mudane Abuukar Abuukar Daahir Cismaan oo sheegay in Siyaad Maxamuud Shire aanan qibrad u laheyn xilka loo dhiibay.
Waxa uuna Xiligaas muujin shaqo wanaag. Culeyska uga yimid Abukar Abuukar Daahir Cismaan ayaa ku qasabtay Siyaad in uu ku noqdo xilkiisii hore ee Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee Sucuudi Carabiya.
MURAN LAXIIRIRA DAQLIGA SAFAARADDA
Dhaliilo joogto ah oo la xiriira Daqliga ka soo baxa Qunsuliyada Safaarada Soomaaliya eeSucuudiga ayaa loo jeedinayay saraakiisha la shaqeysa oo lagu dhaliilay in aanay soo gudbinin warbixino la xiriira daqliga rasmiga ah ee kasoo xaroodo Qunsuliyadda, oo xiligaasi waxaa jiray Tuhun dhanka daqliga.
Arintaasi ayaa sare uqaaday walaaca laga qabay suurto galnimada falal musuq maasuq ah ee
la’aaminsanaa in ay ka jireen safaarada Soomaaliya ee Sucuudiga oo ah Safaaradda labaad ee soo saarta daqliga ugu badan ee ay soo saaraan Safaaradaha Soomaaliya dalalka kala duwan ay ku leedahay, Maadaama ay u adeegto muwaadiniin aad ubadan maalin waliba.
Safar uu sidoo kale sanadii hore ku yimid Siyaad Maxamuud Shire Magaalada Muqdisho ayee u suurto gali weysay in uu ka gaaro Go’aankiisa oo ahaa in wasaaradda Maaliyaddu ay Miisaaniyad Bille ah u qorto Qunsuliyadda uu madax ka yahay ee Magaalada Jiddeh.
Siyaad ayaa arrintaa ku gacan seeray maadaama Wasiirkii Maaliyadda ee Xukuumadii hore uu kahor yimid, waxa uuna badalkeeda ka dalbaday Qunsliyadda.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdi raxmaan Ducaale Beyle ayaa Qunsulka ka dalbaday in Safaaraddu ay soo gudbiso Warbixin Cadeyneysa Dhaqaalaha Soo gala Qunsuliyadda si uu ula socdo Dhaqdhaqaaqa daqliga saraafadda.
Cabdi Raxmaan Beyle ayaa Siyaad u diray digniin ku aadan in wasiirku uusan u sii dulqaadan doonin Soo gudbin la’aanta qunsuliyadda warbxin daqliyeedkeeda, arintaasi oo noqotay mid uusan ku qancin Siyaad oo la sheegay in uu isku haleynayay Madax sare oo ka tirsan Dowlada.
Siyaad ayaa isagoo iska dhego tira Digniinta Wasiirka ayaa sido kale ku amray Siyaad in uu joojiyo Safarada aan muhiimka aheyn ee uu ku imaanayo Magaalada Muqdisho.
Safarada eysan la socon Wasaaradda Arimaha Dibada ee ay galaan Diblumaasiyiinta Safaaradaha ayaa ku qasbay Wasaaradda Arimaha Dibada Soomaaiya in ay soo saarto sharci adkeynaya Xiriirka Safarada aanan Muhiimka aheen ee tirada badan ay safameynayaan Diblumaasiyiinta.
Sharciga cusub ee ay soo saartay Wasaaradda Dibadda oo cadaadis lagu saarayo in ay yareeyaan Safarada diblumaasiyiintu ayaa ku amraya Diblumaasiyiinta Safaaradaha in aanay u bixi Karin safaro banaanka ka ah Wadamada ay ka howl galayaan amar la’aan, iyadoo lagu amray in safar waliba ee ay galayaan ay tahay in marka hore fasax ay uga helaan wasaarada.
Sanadkii 2014-kii Booliska Kenya waxa ay ku xireen Siyaad Maxamuud Shire intii ay wadeen Howlgalkii Raafka ahaa ee ka dhacay Magaalada Nairobi, waxaana ka dhashay Muran Diblumaasiyadeed oo soo kala dhex galay Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.
Booliiska Kenya ayaa ku adkeystay in Siyaad aanu heysan cadeymo ku filan oo muujinayay xilkiisa diblumaasiyadeed, sidaa awgeedne ay ugu dareen howlgalkii Raafka ahaa ee ay sameeyeen.
Arintaasi ayaa sidoo kale ku qasabtay Dowlada Soomaaliya in ay kala soo baxdo Safiirkeeda Nairobi oo lagu soo celiyay magaalada Muqdisho, si Dowladda ay u muujiso ficilkii Siyaad lagu sameeyey, Todobaadyo ka hor inta aysan labada wadan xalinin muranka ka dhaxeeyay.
Waxaa qoray Jeff Mwaura, waxaa lagu qoray jeff@alleastafrica.com waxaana Soomaaliyeey Bashiir Maxamuud Yuusuf.
Halkaan ka Akhriso Dastuurka KGS oo laga Beensheegayo
"Gacanyarahii G/Yariisow oo lacag xooggan la baxsaday Xog!!
Shaqaalaha Dowladdu xubin ma ka noqon karaa xisbiyada siyaasadda?
Wasiir-kuxigeenka maaliyadda DF oo kudhacay gef dhanka dhaqanka iyo Afka ah!!
Loolanka ku-xigeenada duqa Muqdisho oo saameyn xun ku yeeshay howlihii maamulka G/Banaadir
Malabku waa daawo Abuu Mansuurna waa Lamid!!!!!!!!!!!!!
Dadweynaha & Dowladu maxey ka faa'iideen Bajaajka?.
DAAWO:- Hooyo Shukri G/Yariisow "54 kun oo dollar hadii aadan dhiibin gurigiina ma helaysaa!!
Haweeney Sucuudi ah oo qoyskeeda dacweysay kaddib markii ay u diideen Ninkii ay calmatay!
Sucuudiga oo Xaqiijiyay Geerida Khaashuqji
AKHRISO: Dowladda Soomaaliya oo taageero u muujisay dowladda Sucuudiga
Booliiska Kenya oo dilay Macalimiin ay ugu shakiyeen Al-Shabaab
Ra'iisul Wasaare Khayre oo kusii jeedda Sucuudiga!!
AMISOM oo Booliska Soomaaliya ku wareejisay Saldhigga Booliiska Deyniile
Maxaa kajiro in Madaxweynaha Sudan lagu Casuumay Somalia?
Taliye ku xigeenka Sirdoonka Sucuudiga oo booqday Somaliland
SAWIRRO:-Qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo warbaxino laga helaayo
Xildhibaan katirsan golaha Shacabka oo raali gelin ka dalbaday Madaxweyne Gaas
Halkee lagu kala qoray Safiirrada cusub ee ay magacaabeen Golaha Wasiirrada Somalia?
the background of the new autonomy president Visits: 665727
What 9 World Leaders Were Doing in Their 20s Visits: 42169
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 37825
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 32843
54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960 Visits: 27821
Wiil dhalinyaro ah oo lagu dilay Muqdisho!! Visits: 35
Daawo:- Farmaajo oo loo qabtay Saddex Maalin in uu jawaab uga bixiyo Khilaafka taagan Visits: 77
Macalimiin lagu dilay degmada Yaaqshiid Visits: 31
AMISOM Oo Qabatay Kulan Dib Loogu eegayo Howlaha Amaan ee Soomaaliya Visits: 17
UK oo beenisay in ay maalgelisay Liyuu Boolis Visits: 28